सीमांकन नै पहिलो शर्त भएको क्रांति लाई तीन बाहुन दल ले बारम्बार सीमांकन फेरबदल हुँदैन भनेर के भनेको? यो कालाबाजारी बोलेको हो।
मधेसी मोर्चा ले ११ बुँदे माग अगाडि सारेको छ। त्यो तलमाथि हुँदैन। ओली ले राष्ट्र लाई सम्बोधन मार्फ़त ती ११ माग पुरा नगरेसम्म चार वटै मधेसी नेता मितेरी पुलमा गएर बसेको राम्रो। महंथ ले स्वास्थ्य का कारन ले सक्दैन भने वीरगंज बस।
वार्ता गरेरै कुरा डुबाएको हो मधेसी नेता हरुले। वार्ता किन? मोलमोल्है गर्ने ठाउँ छ जस्तो सन्देश दिने काम किन गरेको?
नाकाबंदी अझ टाइट गर्नुपर्छ।
यो सात प्रदेश को नक्शा bottomline हो।